Ukubala kwamagama kunye neFuthe lobude beMxholo kwi-SEO | Martech Zone
Ixesha elide, bendizama ukubonisana nabaqalayo nabaxhasi bamashishini amakhulu kuba bendisazi ukuba ndiza kuba nakho ukuhambisa inaliti yokuguqula kakhulu iinkampani ezinemithombo kunye nexesha lokufaka isabelo sentengiso. Kunyaka ophelileyo, okokuqala, ndaye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise ubuchwephesha obunye endabusebenzisa kwezo nkampani zinemimandla, iinkampani ezincinci ...
Isiseko seqhinga kukushiya ifayile ye- Umgca wokuvelisa umxholo kwaye endaweni yoko, kuphuhliswa ilayibrari yomxholo. Ukugxila kwethu akukho kumaxesha okanye kumanqanaba amanqaku ethu esiwavelisela umthengi, kukuphanda izihloko abanomdla kuzo kwaye ezichaphazelekayo kwishishini… nabaxhamli beenkonzo. Iziko lokugxila lisusa inkampani kwaye, endaweni yoko, libeke umthengi okanye ithemba kwishishini embindini womxholo.
Umzekelo, ndinabahlobo abalungileyo abanamandla amakhulu kwaye afikelelekayo iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba. Ngeempawu ezinjengokhenketho lweselfowuni, ukuthumela imiyalezo, iCRM, iileta zeendaba ze-imeyile, kunye nentengiso ezenzekelayo… banokubhala malunga nezo zinto kunye nezibonelelo yonke imihla. Oko kuya kubeka inkqubo yabo kwisiseko sesicwangciso sabo somxholo.
Kodwa ayizukuqhuba isikhundla okanye uguquko.
Ngoba? Kungenxa yokuba iindwendwe zinokubona indawo yazo, zifunde malunga neempawu zazo, kwaye zibhalisele iakhawunti yesilingo sasimahla. Amakhulu eengcebiso kunye namanqaku amaqhinga anokufumana ezinye izabelo, kodwa azizukuguqula.
Ukugxila komsebenzisi kuthelekiswa nokuGxila kwiAlgorithm
Kunoko, Isosi seAgent isebenza ngencwadana, ibhlog, kunye nepodcast ejolise kwimiceli mngeni kunye nezibonelelo zokuphumelela umthengisi zindlu. Baye baba neengxoxo malunga nemicimbi yezomthetho, i-VA mboleko, ukufuduswa kweshishini, iirhafu zikarhulumente kunye nezomdibaniso, uqoqosho lwengingqi, ukubeka indlu ekhaya, ukufakela indlu, njl. kukubonelela ngobungcali obuvela kwimithombo yeshishini eya kuthi incede amathemba abo kunye nabathengi bathengise ngokukuko ngakumbi kwaye bakhule ishishini labo.
Kodwa akukho lula. Okokuqala, kufuneka baphande ukuba loluphi usuku ebomini bearhente kwaye iyonke imiba abacelw 'umngeni yiyo. Ke, kuya kufuneka bakhe ubungcali babo okanye bazise ezinye iingcali ukunceda amathemba abo kunye nabaxumi. Kwaye kufuneka bayenze yonke loo nto ngelixa beqhubeka nokuhlala benokhuphiswano neqonga labo.
Nangona kunjalo, ifuthe kukuba baya kuba sisixhobo esikhulu ngaphakathi kwishishini kwaye bakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabaphulaphuli. Ngethemba, baba sisixhobo sokugcina abagcina phezulu engqondweni kunye nomxholo wabo osemgangathweni. Kubathengi, bayabanceda ukuba baphumelele kwaye bonwabe ngemisebenzi yabo.
Umxholo-Ubude xa kuthelekiswa noMgangatho woMxholo
Buza uninzi lwababhali ngesicatshulwa ukuba baphande kwaye babhale inqaku, kwaye impendulo iyafana:
Liliphi igama elibalwayo kunye nomhla wokugqibela?
Le mpendulo iyandibulala. Nantsi into ekufuneka ibe ngumbuzo:
Ngoobani abaphulaphuli kwaye iyintoni injongo?
Ngeli xesha, umbhali unokwenza uphando lokuqala kukhuphiswano, kwizixhobo, nakwimeko yabaphulaphuli ekujoliswe kubo kwaye abuye noqikelelo lokugqitywa kwenqaku kunye neendleko. Andikhathali ngobude bomxholo; Ndiyakhathala Ukuchaneka komxholo. Ukuba ndipapasha inqaku malunga nesihloko, ndifuna ukuphendula yonke imibuzo ehambelana nalo mxholo. Ndifuna ukubonelela ngezibakala kunye namanani. Ndifuna ukufaka imizobo, iitshathi, imifanekiso kunye nevidiyo. Ndifuna ukuba eli nqaku libe lelona nqaku libalaseleyo kwi-Intanethi.
Kwaye xa sipapasha inqaku elipheleleyo, eliphandwe kakuhle, elingcono kunayo nayiphi na enye imithombo, ubude belo nqaku buye bude, kunjalo. Ngamanye amazwi:
Ngelixa umxholo wokudibana uhambelana nenqanaba leinjini yokukhangela kunye nokuguqula, ayenzi njalo unobangela Ukubeka ngcono kunye nokuguqula. Ukuphucula umgangatho womxholo kubangela ukuhleleka okungcono kunye nokuguqulwa. Umxholo womgangatho uhambelana nobude bomxholo.
Ngale nto engqondweni, masijonge kulungelelwaniso (hayi ubumbeko) lomxholo ubude, ukwenziwa kweinjini yokukhangela, kunye nokuguqulwa kolu lwazi lubanzi lweCapsicum Mediaworks, Ubungakanani beMxholo buchaphazela njani i-SEO kunye nokuGuqulwa. Umxholo osemgangathweni ophezulu okwenzeka ukuba ube ne ubalo lwamagama aphezulu Uluhlu olungcono, kwabelwana ngalo ngakumbi, kubalwa ixesha elide, kungena nzulu, kwandisa ukuguqulwa, ukuqhuba ukukhokelela, kunye nokwehlisa amaxabiso okubuyisa.
Isiphelo sibalulekile; umgangatho umxholo wexesha elide lulondolozo olungcono.
tags: umxholo we-infographicubude bomxholoUmxholo womxholoinqanaba lomxholoumxholo wophandoubalo lwamagamaguqukaIxesha elingakananimangaphi amagamaindlela yokubeka ngconokwi-infographicumxholo wefom endeuphawuudidiuphandoSEOngokucokisekileyoisibalo samagama
Kutheni le nto Inkampani yakho kufuneka ihlawule i-DNS elawulwayo?
Inokuchaneka: Yondla iimveliso zakho kwiXabiso lokuThelekisa iiWebhusayithi, amaQabane, iiMarike, kunye neeNethiwekhi zeNtengiso